လူ မသေပေမဲ့ နာမည်သေသွား တဲ့ ကိုညိမ်းမောင် နဲ့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ခံစားချက်ကွာဟမှု မတူညီကြတဲ့ ရေမွန်ကွယ်လွန်မှု – Shwe Likes
G Shwe | July 7, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိတ် သတ်ကြီးရေ…သင်္ကြန်မ င်းသားကြီးနေေ အာင် ကတော့ အနုပ ညာလောကမှာ သက်တမ်း ကြာမြင့်စွာနဲ့ ပါဝင်သရု ပ်ဆောင်သူဖြ စ်ပါတယ်။ မနေ့ကတော့ ဆိုရင်ဖြင့် ထပ်ဆင့်အ ကယ်ဒမီမင်းသားကြီး ဦးနေေ အာင်ကွယ်လွ န်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းအမှားေွ ထွက်ပေါ်နေ တာပဲဖြစ် ပါတယ်နော် ။ ဦးဝင်းမြိုင်ကြီးက post တင်တယ်ကိုငြိမ်း
မောင်ဆုံးပြီတဲ့…။ ခဏကြာတော့ ပြန် တင်တယ် နေဒေါင်းနဲ့ နာမည် နားကြား လွဲပြီး တင်မိ တာပါတဲ့…။ ကိုငြိမ်းမောင် မေ သသေးပါဘူး ရှိပါသေးတ ယ်တဲ့။ သူ့ဟာသူ သေသေရှင်ရှင် ကျတော်တို့အ တွက်က ဘာမှအရေးကြီး တဲ့ သတင်းလည်းမ ဟုတ်သလို ဝမ်းနည်း၊ဝ မ်းသာလည်း မဖြစ်ဘူး။ အနုပညာ ရှင်တစ်ယောက်အေ နနဲ့လည်း ဆုံးရှုံး
လိူက်ရတယ် လို့ မခံစားရဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက အကယ်ဒမီ များရှင်ကြီး တစ်ယောက်အနိစ ္စရောက်တယ်။ လူတ စ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးမို့သံဝေဂရစရာ တစ်ခုအနေနဲ့ မြင်မိပေမယ့် မျက်လုံးထဲ မှာတော့ သူ့ကျွန်မခံပြီဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ သူအကယ်ဒ မီရတဲ့ နှစ်မှာစင်ပေါ် ကနေ သူ့ကျွန်မခံပြီ သူ့ကျွန်မခံပြီ ဆိုပြီး အော်တဲ့ပုံရိပ်ကြီးကို
ပြန်မြင်လာတော့ ကျတော်ဘာကိုတွေးမိလဲဆိုရင်သူသေတာ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်တာတစ်ခုကလွဲရင် တိုင်းပြည်အတွက်တော့ ဘာမှ နှမျောစရာကိုမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ ခုလည်း ကိုငြိမ်းမောင်ရဲ့ သတင်းကိုကြားတယ်။အေးဆေးပဲ သေ သေတယ်ပေါ့ ဘာကိုဝမ်းနည်းစရာ၊ နှမျောစရာရှိမှာလဲ ။ သက်တမ်းစေ့အောင်
နေသွားရလို့ သူတို့ကတော င် သေမင်းကို ကျေးဇူး တင်ရဦးမယ် ။ မသေဘူးဆိုေ တာ့လည်း ဟူး…တော်သေးတာပေါ့ တကယ်မဟု တ်လို့ဆိုပြီး လည်း မတွေးမိဘူး။ကျတော့် အတွက်တော့ ဒီအချိန်မှာ လူတစ်ယောက် သေဆုံးခြင်းကို နိုင်ငံရေးနဲ့ပဲသွားသွားပြီး ချိန်ထိုးမိနေတယ် ။ သူမသေခင် ဘာတွေလု ပ်သွားလဲ သူ့အနုပညာ၊သူ့
မိသားစု ၊သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သူထားတဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ဓါတ် အပြင် လက်ရှိ ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မဘက်မှာရော သူဘယ်ဘက်က ရပ်တ ည်လဲဆိုတာကို ပဲကြည့်မိတယ်။ တွတ်ပီဆုံးတော့ တအားဝမ်းနည်း မိတယ်။ မိတ်ဆွေတ စ်ယောက်၊ ကိုယ်သဘောကျ ရတဲ့ အနုပညာရှင်တ စ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက် ရတယ်ဆိုတာထက် မ္မဘက်မှာရပ်တည်ေ နတဲ့
လူတစ်ယော က်ကို လမ်းတစ်ဝ က်မှာ လွှတ်ချခဲ့လို က်ရတ ယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကြောင့် ပိုပြီးနာကျင်မိတယ်။ ခံယူချက် တစ်ခုအတွက် နဲ့ ဝါသနာတွေ၊ဘ ဝတွေကို စွန့် ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ဒီခရီးကိုသွားခဲ့ တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခု နဲ့တင် သူသေဆုံးသွားရခြင်းက ကိုငြိမ်းမောင်တို့ ၊ ဟိုအကယ်ဒမီများရှင်တို့ထက် ပိုမြတ်တယ်။ ထင်းတုံးတွေ၊ကား
တာယာတွေနဲ့ သဂြိုလ်ခံခဲ့ရတဲ့ သူ့အသုဘက ရွှေထီးေ တွမိုးပြီး ပြင် ဆင်ထားတဲ့ အသု ဘထက်ပိုခမ်းနား တယ်။တွတ်ပီ မရှိတော့ဘူး လူတော့ေ သသွားပြီဒါပေမယ့် သူ့နာမည်က ကျတော့်တို့ရ င်ဘတ်ထဲဘ ယ်တော့မှ မသေဘူး။ အကယ်ဒမီများရှင် သူလည်း မနေ့တစ်နေ့ကမှ လူေ သသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့နာမည်ကတော့ ကျတော်တို့
ရင်ဘတ်ထဲ နှစ်ပေါင်းများစွာထဲက သေ သွားတာကြာပြီ။ ကိုငြိမ်းမောင် လူမသေပါဘူး တဲ့…ဟုတ်ကဲ့… နာမည်ကတော့သေသွား တာကြာ ပါပြီ။ ဒီလိုပါပဲ တစ်ချို့တစ်ချို့သော သူတွေရှိပါသေးတယ်။ လူကတော့ အကော င်းကြီးရှိပေ မယ့် နာမည် သဂြိုလ်ခံလိုက်ရတဲ့ သူတွေနဲ့အနုပညာ ရှင်တွေပေါ့…။ ဒီနေရာမှာ ဆရာမ ပန်းရိပ်ဖြူရဲ့
စကားလုံးေ လးယူသုံးရ ရင်ဒီအရေးေ တာ်ပုံြ ကီးဖြစ်တော့မှပဲ ကိုယ့်အရှေ့မှာ မျက်စိနဲ့ မြင်လိုက်ရတဲ့ ရေခဲပန်းပုတွေမှ အများြ ကီးဆိတာပါပဲ…။ ဆိုပြီးပရိသ တ်တွေကြားထဲမှာေ ဝဖန်မှုတွေမြင့် တက်နေပါတယ်. ..
မင်းသားကြီးေနအောင် သေဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေတ က်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်း ပရိသတ်တွေ ဝမ်းနည်းမှု မရှိခဲ့ကြပါဘူး ပရိသ တ်ကြီးရဲ့ ခံစားချက်ေ တွကိုလည်း ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်.
ကိုဗစ် ကူးပီး အောက်ဆီဂျ င်ပြတ်ကာ ယနေ့မ နက်မှာ ကွယ်လွ န်သွား ပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆော င် ဦးရွှေလဝင်း